Ingadi yaseZaid - Ukuthula, uthando & permaculture - I-Airbnb
Ingadi yaseZaid - Ukuthula, uthando & permaculture
Tagounite, Souss-Massa-Draa, i-Morocco
Ikamelo e-indawo esepulazini ibungazwe ngu-Khalid
Ingadi yaseZaid iwumndeni ophethwe yimi, umkami nezingane zethu ezimbili - ezineminyaka engu-3 & 5 ubudala, enepulazi le-permaculture.
Siqasha kuphela impesheni egcwele.
Ibhulakufesi, isidlo sasemini nedina sinikeza ama-80 MAD umuntu ngamunye nosuku.
Okuhle kwemifino noma i-vegan kungalungiswa, vele usazise ngaphambili.
Ukudla sikucela ukuthi ukukhokhele uma usulapha futhi usekheshi.
Indlu inkulu inamakamelo avulekile emhlabeni omkhulu ozungezwe izihlahla zesundu. Kukhona ngisho nebhendi ebukhoma edlala ubusuku obunye.
Ingadi yaseZaid yasungulwa ubaba ngeminyaka yawo-1940. Ngemva kokuthatha ipulazi ngaliqamba ngokuhlonipha ubaba uZaid. Wakha i-oasis yepulazi lamadethi, eletha kuze kube namuhla inani elikhulu lezinsuku zezihlahla azitshala. Futhi okukhethekile komkami, ukupheka isiphuzo sedethi esimnandi salezo zinsuku zokudla kwasekuseni.
Indlu inkulu, ngoba kwakuhlelwe ukuthi ibe nendawo yawo wonke umndeni omkhulu. Eduze kwendlu kunomhlaba omningi wokulima onezihlahla zesundu eziningi, ezinikeza umthunzi elangeni elishisayo.
Njengoba izivakashi zami zihlala zisho futhi ngingavuma, umkami ungumpheki osezingeni eliphezulu wokudla kwangempela kwe-berber. Ngesikhathi sokuhlala kwakho uzozizwa unambitha ikhishi elihle, nsuku zonke, nesinkwa esenziwe ekhaya esivela kuhhavini we-kley.
Kwesinye isikhathi siba neqembu lendawo eliyimihambima endlini yethu lidlala umculo. Umenywa ukuthi ubambe iqhaza ngokudlala, ukudansa noma ukulalela nje. Ezinsukwini ngaphandle kwebhendi sidlala umculo sodwa ngezinsimbi zomdabu, izigubhu, i-banjo nesiginci.
Ingadi yase-Zaid isemaphethelweni e-Tagounite, idolobhana eliwugwadule elincane, elizolile neliyiqiniso elingenazo ezokuvakasha. Isikhungo sifinyeleleka ngokushesha emizuzwini eyi-10-15 Kunamakhefi athokomele, izitolo, imakethe yendawo yamasonto onke kanye nama-hamam amabili, lapho ongazama khona indlela evamile yokugeza.
Ukuya edolobhaneni elilandelayo i-M'hamid yimizuzu engama-30 kuphela ngebhasi noma itekisi - iM'hamid iyidolobhana lokugcina ngaphambi kokuqala kogwadule lwaseSahara olungapheli.
I am Khalid Benabbou, I am 38 years old and live with my nomad family in the zaid garden, on the edge of the sahara desert. I have a date farm and i do organic farming with some animals and I am also a tour guide and events organizer of the sahara desert amongst many other places in morocco.
I am Khalid Benabbou, I am 38 years old and live with my nomad family in the zaid garden, on the edge of the sahara desert. I have a date farm and i do organic farming with some an…
Ngivame ukuba njalo endlini, uma ngingekho ohambweni bekamela ogwadule.
Ngijabulela kakhulu ukukhuluma, ukwabelana ngezindaba noma ukudlala umculo nesivakashi sami. Lena indlela yami "yokuhamba", ngihlola amasiko ngokuhlangana nawo endlini yami.
Okuhlangenwe nakho kwami nesivakashi sami esikuthandayo, wukuthatha uhambo lokuya e-Sahara bekamela. Iyindawo eyingqayizivele, enhle kodwa futhi enokhahlo, ngenxa yesimo sezulu. Futhi ithuba elihle lokwabelana ngolwazi mayelana neSahara, umlando namasiko.
Ngijabulela kakhulu ukukhuluma, ukwabelana ngezindaba noma ukudlala umculo nesivakashi sami. Lena indle…